Blockchain News 30 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 30, 2018 Admin
Cryptocurrency fifanakalozana baiko intsony broker raharaham-barotra amin'ny alalan'ny alemà regulator
Zavatra Financial maso Authority (BaFin) dia nandidy Crypto.exchange GmbH, ny Berlin-monina fifanakalozana, avy hatrany intsony ny manao toy ny ara-bola broker.
Ny didy navoaka taorian'ny dokam-barotra ny fifanakalozana amin'ny tranonkalany, btc-now.de, fa dia mivarotra ny BitCoins mpanjifa ny euro sy hivarotra azy amin'ny fifanakalozana tahiry, Hoy i BaFin in fanambarana. Ny mafy nilaza ny fividianana vidiny ho nafindra tany amin'ny mpampiasa vola ao anatin'ny 30 minitra, Hoy koa ilay.
Araka ny BaFin, ny ara-bola ny asa fandraharahana niasa Crypto.exchange GmbH dia tsy nahazo alalana ny regulator. Ny ara-bola Watchdog nandray ilay fanapahan-kevitra rehefa mpampiasa nilaza fa tsy nandray vola ho an'ny cryptocurrency izay nafindra tany amin'ny mafy, Hoy Bloomberg.
Sberbank ny Soisa fanampiny dia varotra eto cryptocurrency
Ny rafitry ny Sberbank fanampiny tany Soisa dia miomana ny manomboka raharaham-barotra tany cryptocurrency ho an'ny mpanjifa, hoy Andrei Shemetov, filoha lefitry ny Sberbank sy ny filohan'ny maneran-tsena ho an'ny fampiasam-bola – Sberbank CIB. Ity no fotoana voalohany ny fanompoana toy izany dia satria nanolotra ny Rosiana banky.
“Ny vokatra Tena mampidi-doza, ny volatility Tena lehibe, Noho izany dia tsy manome ireo tolotra any amin'ny malalaka faobe ny mpanjifa… Isika ankehitriny manomana ny foto-drafitr'asa iray manontolo mba manomboka manome tolotra ao anatin'ny Soisa fanampiny… Izahay fanorenana ara-barotra feno setup mba hahafahantsika sady manokatra amin 'ny toerana sy manome tolotra mpanjifa, izay, hividy sy hivarotra ny mpanjifa.”
Samsung Nanomboka dingana famokarana ho an'ny ASIC poti for cryptocurrency fitrandrahana
The Bell (Koreana vohikalam-baovao) mitatitra fa efa Samsung Nanomboka namoaka poti for Bitcoin fitrandrahana volana ity.
Ny tatitra dia milaza fa Samsung efa nanao sonia ny fifanarahana miaraka amin'ny orinasa Shinoa fitaovana mifandray amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany Bitcoin, ary efa nanomboka sahady amin'ny famokarana ny poti- – tamin'ny fitanisàna ny tsy fantatra Samsung ofisialy.
Koa Mitohy milaza fa vita ihany koa Samsung fampandrosoana ny ASIC Semiconductors for Bitcoin harena ankibon'ny tany tamin'ny herintaona.
Ny tena mpanjifa ny ...
Previous Post:Blockchain News 29 Janoary 2018
Next Post:Ahoana no ho lasa blockchain developer